Sawirro: Ra’iisul Wasaare Rooble oo la ciiday shacabka – Benaadir News Network
Sawirro: Ra’iisul Wasaare Rooble oo la ciiday shacabka
Muqdisho (Benaadir News) – Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa boqollaal shacab iyo mas’uuliyiin ah kula tukaday masjidka Shuhada ee ku dhex yaallay madaxtooyada Soomaaliya.
Ra’iisul Wasaaraha ayaa shacabka ugu baaqay in la caawiyo dadka masaakiinta ah, lagana wada shaqeeyo amniga dalka si bulshada Soomaaliyeed ay ugu wada ciidaan farxad iyo damaashaad.
Sidoo kale Rooble ayaa Shacabka Soomaaliyeed ugu hambalyeeyay Maalinta Koobaad ee Ciidul Fitriga, isaga oo u rajeeyay in sanadkaan sankiisa kale ay ku gaaraan Bashbash iyo Barwaaqo.
Ugu dambeyn Ra’iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa ugu baaqay Shacabka ku nool Magaalada Muqdisho inay Ciidamada kala Shaqeeyaan sugida amniga dalka.
Previous Xog: MASJID ku soo dumay dagaal-yahano Al-Shabaab ah kadib arrin ay sameeyeen
Next Wararkii ugu dambeeyey duqeynta Yahuudda ee Gaza iyo gantaalaha jawaabta ah ee Xamas